Anyị Technology - Dongguan JinRong Aliminum Products Co., Ltd
Anyị ụlọ ọrụ tumadi specializes na mmepụta na nhazi nke anyanwụ mmiri-aluminum alloy profaịlụ, gụnyere aluminum alloy okpokolo agba, ulo oru aluminum profaịlụ, ụzọ & window profaịlụ, mmepụta akara profaịlụ, okpomọkụ ahụ profaịlụ, na aluminum akpa.
Anyị ụlọ ọrụ nwere a dum set nke dị na akpaaka elu àgwà ngwá, abụọ buru ibu-ọnụ ọgụgụ CNC elu ngwá, sawing igwe, onye homogeneous mmepụta akara, na 10 extrusion mmepụta e. E nwere vetikal na kehoraizin ọxịdashọn na electrophoresis mmepụta edoghi, atọ kwụ ọtọ na kwụ ịgba mkpuchi mmepụta edoghi, otu fluorocarbon mkpuchi akara, otu okpomọkụ nyefe mmepụta akara na atọ ike na-azọpụta ma agbajikwa-akwa mmepụta e. E nwere elu ọgwụgwọ ụzọ nke ọxịdashọn, electrophoresis, spraying, fluorocarbon, na sandblasting na anyị ụlọ ọrụ.
Dabere na ihe mgbaru ọsọ anyị nke "ike ịzụlite gburugburu ebe obibi-enyi na enyi na ume na-azọpụta ụlọ ọrụ", anyị ụlọ ọrụ emewo karịsịa ẹkenam n'ụzọ zuru ezu akpaka nkuku igwe, pụrụ iche etiti punches, na ọgwụgwụ mills, nke ndị pụrụ iche maka aluminum okpokolo agba. Anyị ụlọ ọrụ specializes na-amị elu àgwà anyanwụ okpokolo agba na iche iche nkọwa. Anyị ụlọ ọrụ aghọwo a aluminum profaịlụ mmepụta enterprise ọma mara na ụfọdụ mba.
Na ọhụrụ na ime nkà ihe ọmụma na ụlọọrụ ụkpụrụ, anyị ga-ewepụtara na nọgidere rụọ ọrụ ka anyị ngwaahịa mma na ọrụ mma. Anyị na-agbalị imezi ihe emezi, ma na-eme unremitting mgbalị iji meziwanye ngwaahịa na green ike akụ na ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na i nwere mmasị na ihe ọ bụla nke anyị na ngwaahịa ma ọ bụ ga-achọ na-atụle a omenala iji, biko chere free ịkpọtụrụ anyị. Anyị na-atụ anya na-akpụ ọma ahịa mmekọrịta ọhụrụ ahịa gburugburu ụwa n'ọdịnihu dị nso.